Borama: Deeq lacageed oo lasoo gaarsiiyay dugsiga H/Dhexe Cumar Binu Khadaab. | Somaliland.Org
Borama: Deeq lacageed oo lasoo gaarsiiyay dugsiga H/Dhexe Cumar Binu Khadaab.
February 28, 2009	Xiriiriyaha Jaaliyada dibada iyo kuwa gudaha ahna Maamulaha shirkada Isgaardhsiinta Telesom Xaaji Cabdiqaadir Aadan Nuur ayaa maanta xarunta shirkadaasi ku guddoonsiiyay deeq lacageed maamulka dugsiga Hoose Dhexe ee Cumar Binu Khadaab.
Xaaji Cabdiqaadir Aadan Nuur oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa sheegay in muddooyinkaan dadaal weyn ugu jiray sidii uu Jaaliyadaha gobalka Awdal u dhashay ee dibada ku maqan kaga dhaadhicin lahaa sidii ay gacan ugu geysan lahaayeen dhismaha Dugsiga Hoose Dhexe Cumar Binu Khadaab oo jago ama dhul la siiyay isla markaana la rabo in loo dhiso.
“Dusgiga muddo dheer magaalada Borama ka jiray arday badana ka baxday iminka waxuu degan yahay guri kiro ah, Alle mahad leh waxaa la siiyay jago ama dhul uu dhisto dugsiga, waxaana loogu baahan yahay Jaaliyadaha iyo cid kasta oo wax ka geysan karta inay kaalin muuqata ka ciyaarto dhismaha dugsiga” ayuu yiri Maamule Cabdiqaadir Aadan Nuur.
Cabdiqaadir waxuu sheegay in deeqdaan saaka uu guddoonsiinayo maamulka dugsiga Cumar Binu Khadaab uu kusoo hagaajiyay Cabdinaasir Cali Cumar oo soo diray $200 Dollar isagoo ku nool dalka Swaziland.
“Cabdinaadir Cali Cumar allaha ka ajir siiyo abaalka iyo waxtarka uu geysatay, mana ahan deeqdii ugu horeysay oo wax kheryi ah ku bixiyay balse hore ayuu deeqo sidaan oo kale ah usoo diray oo gacan ka geystay waxyaabo kheyri ah oo gobalka laga hirgalinayay, walaalaha kalena waxaan ugu baaqayaa inay lasoo saftaan Cabdinaasir oo gacan naxariisi ku dheehan tahay soo fidiyaan” ayuu yiri Cabdiqaadir Aadan Nuur.
Deeqdaan uu guddoomaya Maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Cumar Binu Khadaab C/wahaab C/laahi Aadanayuu hadal kooban uu halkaasi ka jeediyay ugu mahad celiyay walaalka maanta lacagtaasi soo diray taasoo uu ku sheegay inay wax weyn ku kordhineysa dhismaha ay iminka bilaabayaan.
Maamulaha waxuu sheegay in dugsiga soo maray marxalado kala badalan waxuuna yidhi “Markii dugsiga’aan bilownay kuraas ma uusan laheyn ardayda waxey ku fariisan jirtay dhagxaan iminka alle mahad leh oo aad aragtaan dugsiga horumar ku talaabsaday taasina waxaa mahad u celinayaa macalimiinta madaalayaasha ah ee habeen iyo dharaar sidii ubadka Awdal ku dhaqan wax u bari lahaayeen u taagan”.
Dugsigaan oo la furay 1994-tii ayaa soo maray marxalado kala duwan, iyadoo ay aasaaseen dhalinyaro mutadawaciin ah iyagoo ku bilaabay arday aan ka badneen 10-arday iyo laba qol oo kaliya oo korkooda baco ka sameysnaayeen iyadoo ardayda kuraas u ahaan jiray dhagxaan ay ku fariistaan. Dugsiga ayaa maanta ka kooban 8-Fasal waxaana la dhigtaa labada galin iyadoo ay dhigtaan arday tiradooda gaareysa 850 Arday oo inamo iyo hablo iskugu jira.
AbdiAziz Mohamed Elmi